ဟိုရှေးရှေးတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ဝက်ကလေး ၃ ကောင်ရှိသတဲ့…
တစ်နေ့ကျတော့ ဝက်ကလေးတွေက အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီး ငါတို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကြမယ်ဟေ့… ဆိုပြီး မြေခွေးကြီး ဆီကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ချေးငွေယူ လိုက်ရော
ပထမဝက်ကလေးက အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာမလေ့လာဘူး စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ကောက်လုပ်လိုက်ရော၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်း မကောင်း ကိုယ့်အလုပ်အကြောင်းလဲ သေသေချာချာ မသိတော့… ငွေတွေကလည်း မကုန်သင့်တဲ့ နေရာတွေကုန်… သူထင်ထားသလောက် ဝင်ငွေမရဘဲ ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နဲ့ နောက်ဆုံး သူပိုင်သမျှ ပစ္စည်းတွေကို ထုခွဲရောင်းချပြီး မြေခွေးကြီးဆီကို အကြွေးတွေပြန်ဆပ်၊ မတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံး တတိယ ဝက်ကလေးဆီမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေသတဲ့ ကွယ်...
ဒုတိယ ဝက်ကလေးကျတော့ သူလုပ်မယ့် အလုပ်ကိုသေချာလေ့လာတယ်… စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်…ဒါပေမယ့် ရှေ့အနာဂတ်အတွက် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Risk တွေအတွက် ကြိုတင်မပြင်ဆင်ထားဘူး… လုပ်ငန်းစပြီး လည်ပတ်တာနဲ့ Operation တွေနဲ့ ပဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်… မြေခွေးကြီး ကိုလည်း အစပိုင်းမှာ တော့ အတိုးတွေ ပုံမှန်စပ်နိုင်တယ်…
ဒါပေမယ့် ရွာမှာ မထင်ထားတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ လုပ်ငန်းတွေရပ်၊ ဆိုင်တွေပိတ်ဆိုတော့ နောက်ဆုံး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ထိန်းထားဖို့ အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံး မှာတော့ လုပ်ငန်းကို ပိတ်သိမ်းပြီး…. တတိယဝက်ကလေးဆီမှာ မန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့ အလုပ်ဝင်လုပ်သတဲ့ ကွယ်….
တတိယဝက်ကလေးက ကျတော့ တကယ်ကို လုပ်ငန်းကိုလည်းသေချာလေ့လာထားတယ်… လုပ်ငန်း တစ်ခုမစခင်မှာထဲက Business Plan တွေကို စနစ်တကျဆွဲထားပြီသား… လုပ်ငန်း Operation ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလို… ရှေ့ဆက် အနာဂတ်အတွက် Financial Plan တွေဆွဲ၊ Projection တွေချ၊ နောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Situation တွေအတွက် Risk Management Plan တွေလုပ်ထားတယ်…
မြေခွေးကြီးကို အကြွေးဆပ်နိုင်ယုံတင်မကဘူး… နောက်ဆုံး ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာတောင် Online ကနေ စီးပွားရေးဆက်လုပ်ပြီး လုပ်ငန်းတွေတောင် ထပ်တိုးချဲလိုက်နိုင်သတဲ့…
အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့က ဝက်ကလေးနှစ်ကောင်က တတိယဝက်ကလေးကိုဝိုင်းမေးကြတယ်… “မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီအောင်မြင်တာလဲ… ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ” ဆိုပြီး… အဲဒီမှာ တတိယဝက်ကလေးက “လုပ်ငန်းဆိုတာ ဘာလုပ်ချင်လဲ ဝါသနာပါတာ လုပ်ရုံနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မလုံလောက်ကြောင်း‌ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရုံနဲ့ မရကြောင်း…ဝင်ငွေထွက်ငွေ စာရင်းအင်းတွေ အပြင် Financial Management နဲ့ Risk Management ပညာရပ်များကို လေ့လာထားသင့်ကြောင်း… အဲကတစ်ဆင့် ပိုပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး..”
“ဟာ လျှာရှည်လိုက်တာ မင်းဟာမင်း 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬 မှာ သင်တန်းတက်ထားရင် တက်ထားတယ်ပြောလိုက်ပြီးတာကို” ------------------------------------ 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬 ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီ အခုလက်ရှိမှာ ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလက်ရှိသည့်အပြင် မြန်မာ့ အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (𝐒𝐌𝐄𝐬 ) အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ Business Advisory Service ကိုပါဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိမိလုပ်ငန်းမှာ လက်တွေ့အသုံးချဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် သင်တော်မယ့် Financial Performance Technique, The Art of Valuation, Financial Performance & Risk Management အစရှိတဲ့ Matrix’s Certificate Course တွေ၊
Finance Field မှာ professionals career တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်လို့တဲ့ Professionals တွေအတွက် CFA, FRM, CITF, CDCS, FP&A, CTP အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Designation တွေ အတွက် စာတွေရော လက်တွေပါ သင်ယူလေ့လာနိုင်မယ့် Exam Prep Program တွေ ကို လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ် အမျိုးမျိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော Experience Instructors များဖြင့် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
Matrix Institute of Professionals ရဲ့ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေတဲ့ Program များနဲ့ MX advisory ကပေးနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို စုံစမ်းမေးမြန်လိုပါက အောက်ပါ အတိုင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
01 8245660, 09 445533 288-289 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ - Matrix Institute of Professionals Room: D-E, Level 2, Bld No: 182-194, Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon. #finance #matrixinstitute #advisory #matrixfinance